नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । उद्योग व्यवसायको कारण देशले आर्थिक क्रान्ति गर्ने बाटोतिर लम्किरहेको देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको बिकास रोजगारीमा वृद्धि र आम नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा समेत उद्यमी व्यवसायीको महत्व रहेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवा न्यू श्रेष्ठ छापाखनाका प्रबन्ध सञ्चालक पूर्णप्रसाद श्रेष्ठ सँग लुम्बिनीखबर पत्रिकाले गरेको कुराकानी ः
१. देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि यहाँको व्यवसायले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
हामीले आफ्नै देशमा सफल उद्योगी भएर काम गरेका छौ । हामीले कर तिरेर देशको अर्ततन्त्रलाई सफल बनाउने हाम्रो मनशाय हो । हामीले तिरेको करमा भ्रष्टाचार नभए देशको अर्थतन्त्र सफल हुन मद्दत हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अवस्था भन्नु पर्दा १०–१२ वर्ष अगाडि राम्रो थियो । अनलाईन सिस्टम थिएन । त्यस कारणले गर्दा अहिले अनलाईन सिस्टम भयो, अनलाइन सिस्टम बाट मानिसलाई काम गर्न छिटो र छरित्तो हुने भएकोले ग्राहकहरुले अनलाइन सिस्टम नै रोज्न थाले त्यस कारण हाम्रो व्यापार व्यवसाय विक्री वितरणमा समस्या तथा घाटा व्यहोर्नु परेको छ । कम्प्युटरबाट ग्राहकलाई काम गर्न सजिलो हुने भएकोले स्टेशनरी सामानदेखि लिएर सबै कार्य अनलाइन बाट हुँदा अहिले हाम्रो व्यवसाय धरापमा छ । यस प्रतिष्ठानले पहिला ७ – ८ जनालाई रोजगारी दिएको थियो, अहिल ४–५ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको छ ।
सफलता पहिला राम्रो थियो । तर गास, बास, कपासको लागि चाँहि भौतारिनु परेको छैन । म आफूले मालिक भएर भन्दा पनि मजदुर भएर काम गरिरहेको छु त्यस कारण मेहनतको फल मिठै हुन्छ । भावी योजना भन्नु पर्दा यो पेशामा रहिरन सकिदैन् भन्ने लाग्छ ।
यही रोजगारमा आबद्ध भएर यही पेशालाई अङ्गालेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरे । जुन पनि व्यवसाय गर्दा कठिनाइ त निश्चय नै हुन्छ । नेपालमा कामदार नपाउने, कच्चा पदार्थको अभाव, खास हामी बोर्डर छेउमा व्यवसाय गर्नेलाई त झनै गाह्रो हुने भन्सार बढी लाग्ने, सरकारी संघ संस्थाहरुले छपाइको लागि भारतमै पठाउने र भारतबाट सामान आयत निर्यात गर्दा छुट हुने हुँदा हाम्रो व्यवसायले घाटा व्यहोर्नु परेको छ । तर पनि काम गर्दा जति कठिनाई परे पनि न्युनीकरण गरेकै छु, तर व्यापार व्यवसायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले बदल्नु पर्छ र राज्यबाट हामी जस्ता व्यापारीहरुको भविष्यको सुनिश्चितता नगरे सम्म हामी सफल व्यवसायी बन्न सक्तैनौ ।
यो व्यवसाय रोज्नुको लक्ष्य भन्नु पर्दा आफ्नै देशमा केही गर्ने, विदेश जान मन लागेन । स्वदेशी भूमिमा केही गर्ने सोचले यो व्यसाय सुरु गरेको हो । अपेक्षा त मान्छेको अनगिन्ती हुन्छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले अगाडि बढ्न त जो कोहीलाई मन लाग्छ, तर नयाँ – नयाँ प्रविधिहरु आउँदा काम गर्न गाह्रो छ ।
आफ्नै देशमा केही गरु भन्ने भावनाले यो व्यवसाय रोजेको हुँ ।